Howlgallo tiro dad ah lagu soo qab qabtay oo laga sameeyay Luuq – Radio Muqdisho
Ciidamada dowladda ayaa howlgallo lagu baacsanayo Maleeshiyaad ka tirsan ururka Gumaadka Ummadda Soomaaliyeed ee UGUS ka sameeyay tuulo hoostagta degmada Luuq ee gobolka Gedo, halkaasi oo ay kooxdan ku xasuuqday qoys deganaa tuulada.
Ciidanka ammaanka ayaa howlgalka waxa ay ku soo qab qabteen in ka badan 20 qof oo ay uga shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin kooxda UGUS.
Bishaar Aadan Cabdikariin Guddoomiyaha Degmada Luuq ayaa sheegay in howlgallada ay yihiin kuwa lagu baadi goobayo xasuuq ay kooxda argagixisada ah ee Shabaab u geysteen qoys ka kooban sideed qof oo shan ka mid ah ay dileen, halka ay dhaawac uga tageen saddex carruur ah.
Sidoo kale saraakiisha ciidamada howlgalka fuliyay ayaa sheegay in ay jiraan maleeshiyaad ka tirsan ururka Gumaadka Ummadda Soomaaliyeed ee UGUS ay si dhuumaaleysi ah ku soo galeen tuulooyin hoostaga degmada luuq, waxaana uu intaa ku daray in dadka lagu soo qabtay howlgalka ay ku socoto baaritaanno dheeraad ah.
saraakiishu waxa ay ballanqaadeen inay sii wadi doonaan howlgallada ay ku xaqiijinayaan ammaanka, loogana hor-tagayo inay magaalada soo galaan xubno ka tirsan Al-Shabaab, iyagoo shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan hay’adaha amniga.
Duqa Muqdisho oo casho sharaf u sameeyay wefdi ka socda Dariiqada Suufiyada ee dalka Suudaan “SAWIRRO”